Tao anatin'izay taloha, ny akanjo toy ny akanjo ho antsika rehetra dia toy ny fiarovan-tena azo antoka amin'ny hatsiaka sy rivotra, tsy amin'ny vehivavy ihany, fa amin'ny lehilahy ihany koa. Ny tantaran'ny endriky ny akanjony voalohany dia mbola mistery, saingy efa tamin'ny taona V-IV millennium BC dia niely patrana ny singa tao amin'ny trano fandroana. Tsy razamben'ny lehilahy sy ny lehilahy ny razambentsika tamin'ny voalohany. Ny dikany dia tsy ny firaisana ihany, fa ny taonany, ny sata sosialy. Tsy mahagaga raha samy nanao akanjo mitovy ny azy. Ary tamin'ny Moyen Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â,
Sarivongan'ny Moyen Âge
Ny tantaran'ny niandohan'ny akanjon'ny vehivavy fahiny dia nanomboka tany Espaina tamin'ny faran'ny taonjato faha XVI. Tamin'izany fotoana izany dia noheverina fa ny singa faran'izay mahazatra indrindra amin'ny akanjo isan'andro, ny akanjom-behivavy, ary ny vehivavy dia nanao akanjo mba hitsidika ny antoko fety. Tsy fantatra mazava hoe iza no nihevitra fa ny fizarana ny kitapo manontolo amin'ny kofehy sy ny akanjony, saingy tena niely be izany. Ny akanjo dia namela vehivavy iray tsy hamorona sary hoso-doko fotsiny, nanova ny akanjony na corset, fa koa mba hamonjy amin'ny lamba an-tapitrisany maro amin'ny Moyen Âge.
Mahagaga fa, ny tantaran'ny famoronana ny akanjon'ny vehivavy dia mifandray amin'ny ... soavaly! Ny volon'olo-koditra dia toy ny mpanenona eo amin'ny tavy maromaro, ka mahatonga ny jirony ho maitso sy maitso. Noheverina ho tsara tarehy ireo akanjo ireo, fa ny lanjan'ny volon'ny soavylavitra dia tsy namela ny vehivavy hifindra an-kalalahana.
Saribakoly goavam-be taorian'ny taona vitsivitsy lasa dia nosoloina modely skeleta. Mifamatotra amin'ny paompy mitovy habe amin'ny pyramida amin'ny diam-pifidianana samihafa, dia napetraka teo amin'ny andilany ny vehivavy, ary nanarona azy ireo tamin'ny lamba tsara tarehy. Ny akanjo toy izany dia nafatotra mivantana tamin'ny corset, noho izany dia tsy afaka niakanjo tsy misy fanampiana ny vehivavy.
Ny Italiana sy ny vehivavy Frantsay dia nanapa-kevitra ny hanaisotra ireo sary matevina manjavozavo, ka nanolo azy ireo tamin'ny fonon-tadin-damba novolena tamin'ny volon'ondry tsotra. Saingy ny tantaran'ny lantotr'ilay akanjo dia milaza fa tsy naharitra ela izany safidy izany. Efa tamin'ny taona XVII dia misy modely misy silhouette mivantana, voaravaka amin'ny rindrina na rindrina telo dimampolo. Nanjary be dia be ny fandrakofam-peo ka heverina ho toy ny mahazatra ny moron- tavoahangy 15.
Volana vitsivitsy taty aoriana, dia nisy lobol-kiraro niditra ho lamaody. Tamin'ny voalohany dia novolavolaina tamin'ny alalan'ireo skeletons ihany ny volombava, saingy nosoloin'ireo mpitrandraka crinoline. Zavatra mahaliana: Ny henjana sy ny hakantony, izay tamin'ny taon-jato IX dia ny lamaody amin'ny lamaody vehivavy, dia nanilika ny akanjo tsy misy loko, afa-tsy ny fotsy. Ny vehivavy tao amin'ny akanjo somary manjopiaka dia natokana ho an'ireo vehivavy mpivaro-tena. Saingy ny fanamafisana ny akoho dia noraisina, noho izany dia notarafina tamin'ny ratsiratsy ny volom-borona - ireo diamondra manokana.
Ankizivavy maoderina ho an'ny vehivavy
Ireo randran-tariby "malemy" tamin'ireo taona 1920, natsangana tamin'ny alàlan'ny Cecilia Sorel, modely fohy novokarin'i Mary Quant ary nalaza tamin'ny anarana malaza Twiggy, somary lavalava lava - na dia maro aza ny fanovana no nanohina ny lohahevitry ny fiakanjoan'ny vehivavy! Ny andraikitr'ireo vehivavy ao amin'ny fiarahamonina maoderina dia naverina nodinihina tamin'ny fiandohan'ny taonjato lasa, koa amin'izao fotoana izao ny fashionista rehetra dia afaka misafidy ny akanjo tiany. Nanjary nilamina sy nampihetsi-po kokoa ny jirom-bolo, tsy nilaina ny nanafina ny shines sy ny lohalika. Manana tarehimarika mivantana sy mamy ary mahavariana izy, fohy sy lava, matevina sy lolo, tsotra sy marevaka, manga sy mamirapiratra - voafetra ny tsiron-tsavony sy ny endrik'ilay vehivavy.
Fotoam-pialan-tsasatra amin'ny ririnina
Inona no tokony hatao eny amin'ny ranomasina?
Colorotype "lohataona maizina"
Nahoana ny fitafin'ireo firenena no nifindra monina tany am-paladian'ny vehivavy lamaody?
Toe-dandy amin'ny vehivavy
Photoshoot amin'ny ririnina
Inona ny loko mifangaro amin'ny manga?
Sakafo izay manafina ny kibo
Masoandro voatabia voatabia
Nanomboka nitovy tamin'ireo rahavaviny manokana i Emma Watson sy Victoria Beckham
Andro manohitra ny TB
Aphrodite andriamanibavy - iza no Aphrodite amin'ny angano grika?
Amin'ny akanjo hanaovana bermuda?
Fanandramana lavanila hi-tech - famoronana hevitra maoderina
Hamaoka ho an'ny saka
Ny vehivavy mody mody 2016
Accessories ho an'ny curtain
Licur de chokeberry mainty miaraka amin'ny ravina cherry
Fitaovana fametrahana efitrano
Elton John dia nankalaza ny faha-70 taonany tamin'ny lanonana tsy miankina iray tany Los Angeles
Ahoana no fomba hiarahabana ny taona vaovao?